Macdanta Industry - Shiinaha Shandong Yulong cellulose
Macdanta Industry CMC waxaa loo isticmaalaa sida pelletizing gal iyo wakiilka nixiyay in industry macdanta. pellet xumu in lagu sameeyey CMC waxay leedahay qaab anti-qarax wanaagsan la kar iyo xoog ku dhacaan of kaabsal qalalan iyo qoyan. Dhanka kale, sida loo hagaajin karo fasalka ee kaabsal. In codsiga pellet ah, CMC samayn kartaa waxa ay leedahay sphericity wanaagsan, iska caabin ah cadaadiska, iska caabin lahayo ku, ku kala firidhsan wanaagsan, xoog sare ee pellet qoyan, heerkulka anti-qarax sare, awood xoog leh si loo xakameeyo oo rel ...
CMC waxaa loo isticmaalaa sida pelletizing gal iyo diiqadoodo wakiilka in industry macdanta. Pellet xumu in lagu sameeyey CMC waxay leedahay qaab anti-qarax wanaagsan la kar iyo xoog ku dhacaan of kaabsal qalalan iyo qoyan. Dhanka kale, sida loo hagaajin karo fasalka ee kaabsal.
In codsiga pellet ah, CMC samayn kartaa waxa ay leedahay sphericity wanaagsan, iska caabin ah cadaadiska, iska caabin lahayo ku, ku kala firidhsan wanaagsan, xoog sare ee pellet qoyan, heerkulka anti-qarax sare, awood xoog leh si loo xakameeyo iyo sii daayo biyaha ee pellet iyo waxqabadka qodniinka- wanaagsan.
In sabeynta ee tayadda, CMC si weyn kor loogu qaado karaan wettability ee granule Rusheyn kartaa oo ay ogaadaan sabeynta kala ore tayadda iyo Rusheyn kartaa.
CMC waxaa loo isticmaalaa sida inhibitors gangue silicate in la xakameeyo hogaanka ee kala ah copper iyo hogaanka. Iyo mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa sida dispersant ah dhoobo.
Nooca warshadaha macdanta: IP50 iyo IP100
Previous: Industry cadayga